Erasing niile data na ọdịnaya bụ a onu na-adịghị na-adọrọ mmasị na akpa ebe ma onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nke a echiche na metụtara ụkpụrụ-agbaso mgbe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ bụ ekwentị na-ere, nyere si ma ọ bụ nyere. Ndị kasị mkpa n'ókè nke na a ga-atụle nke a bụ eziokwu ahụ bụ na data na-ehichapụ iji wuru na ngwaọrụ bụ 100% recoverable na ọ bụrụ na ọ na e dere mwute Ama mgbe ahụ onye ọrụ ga-idikwe. A nkuzi bụ ihe niile banyere na-adịgide adịgide nhichapụ nke dum iPhone data.
Gịnị ka "Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube" na-eme na iPhone?
Ndị kasị dị mfe azịza nke ajụjụ a bụ na ekwentị na-aghọ ohuru na ya nwere otu mmetụta dị ka nke mmepụta ihe tọgharịa ma nnyocha na nke a egosiwo na data na e ehichapụ site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta Usoro bụkwa recoverable na iji elu ngwá ọrụ na teknụzụ na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ahụ bụ ihe kasị na nke a na-etinyere iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara. Ọ bụrụ na usoro a ga-kwuru na n'ọkara ikpeazụ nke nkuzi na-etinyere mgbe ahụ ihe ịga nke ọma ohere bụghị nanị n'elu 100 ma data na a ga-ehichapu-eji nke a onu ga-emekwa ka n'aka na ọ na-anọgide nchebe oge niile. Nke a na onu ga-emekwa ka n'aka na data ike n'ezi na-echebe niile ugboro.
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi maka ekpocha data si iPhone kpamkpam:
1.The iPhone ntọala na-na-enweta iji jide n'aka na usoro-akpali na ụzọ nke ziri ezi na nakweere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi:
2. The ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na "Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube" nhọrọ họrọ iji jide n'aka na ngwaọrụ na-kpochapụrụ kpamkpam. Ọ bụ-ahụ kwuru na tọgharịa ntọala niile ga-ahụ na naanị ntọala na-kpochapụrụ na data anọgide enem. Ọ bụ n'ihi otu ihe ahụ mere abụọ nhọrọ na nke a bụ na-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na needful na-mere na ala na afọ ojuju:
1 pịa ka na-adịgide adịgide ihichapu niile ọdịnaya na ntọala na iPhone
Wondershare SafeEraser bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme n'aka na iPhone resetting dị mfe ịrụ na nke kacha mma na ọkaibe usoro na nakweere na-eme ka n'aka na data na-ehichapụ ruo mgbe ebighị ebi. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro a ga-kwuru na a akụkụ nke nkuzi bụ a ga-agbaso iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results oge niile.
-Esonụ bụ ụfọdụ isi atụmatụ nke usoro ihe omume nke na-eme ya otu n'ime mma niile ugboro na ana achi achi na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na mmekọrita ngwaọrụ wiping:
The GUI ma ọ bụ onyeōzi ọrụ interface na-eme ka n'aka na ojiji nke usoro ihe omume dị mfe na onwe nkọwa na ọ na-ana achi achi na onye ọrụ na-dịghị mgbe ọ kwụsịrị mgbe usoro ihe omume a na-eji maka ngwaọrụ nhichapụ.
Na otutu nhichapụ ọwa agbakwunyere a usoro bụ otu n'ime ụzọ kacha mma iji hụ na data na-ehichapụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nchebe owuwu oge niile.
Usoro ihe omume na-akwado niile faịlụ na-akwado site na iPhone ya mere ọ nwere ike ihichapụ ọ bụla faịlụ a onye ọrụ nwere ike na-eche nke.
Ihe omume ahụ bụ otu n'ime ndị kasị mma isi jide n'aka na njirimara nakwa dị ka data na-ezu ohi na-igbochi na-echebe na-nyere ka onye ọrụ na nke a.
Olee otú na-adịgide adịgide ihichapu niile ọdịnaya na ntọala si na onye na iPhone?
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà usoro na e kwuru n'okpuru na-soro na-arụ ọrụ mere na àgwà na klas:
1.Make n'aka na ihe omume a na ibudatara na arụnyere. Ozugbo ngwaọrụ na jikọọ na omume mgbe ahụ isi interface ga-gbapụta na ya:
2.The ihichapu niile data nhọrọ a na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na usoro Ọganihu na nri direction:
3.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ime ka n'aka na okwu ihichapụ na-mesịa n'ihu n'ihu na nke a:
4.The ngwaọrụ bụ a ga-edebe ejikọrọ iji jide n'aka na usoro a soro na nke kacha mma n'ụzọ:
5.Once data e ehichapụ onye ọrụ ga-ozugbo na usoro nwekwara agwụ ebe a:
Olee otú Hichapụ iPhone Backups
> Resource> ihichapu> Olee ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala na iPhone